Lego Ideas livestream ထုတ်ဖော်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းရလဒ်များကိုယခု
12 / 02 / 2020 13 / 02 / 2020 ဂရေဟမ် 4420 Views စာ0မှတ်ချက် Ideas, Lego, Lego Ideas
အဆိုပါ Lego Ideas အဖွဲ့သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်ရလဒ်များကို Facebook ပေါ်တွင်တိုက်ရိုက်ကြေငြာခဲ့သည်။
လာမယ့်ကဘာလဲ Lego Ideas? ပရိသတ်များအနေဖြင့်၊ 3.00pm (UK time) တွင်ရှာရန်ရှိသည်။ Lego Ideas Design Manager Samuel Johnson နှင့် Engagement Manager Hasan Jensen သည်ကမ္ဘာကြီးနှင့်မျှဝေမည် နောက်ဆုံးပေါ်ပြန်လည်သုံးသပ်ကာလ၏ရလဒ်များကို.
ဖေဖော်ဝါရီလအစမှာ Lego Ideas 21321 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအာကာသစခန်း မှာသီးသန့်ဖြန့်ချိခဲ့သည် LEGO.com။ အစုကိုဒီနှစ်နှောင်းပိုင်းအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်လိမ့်မည် အဆိုပါ Playable စန္ဒရား, နှမ်းလမ်း နှင့် အဆိုပါ Pirate ဂလားပင်လယ်အော်.
ကုန်ပစ္စည်း 11 ခုရှိပါသည် ideas နောက်ဆုံးသုံးသပ်ချက်ကာလ၌
Snelson42 မှ UCS Space Shuttle Atlantis
Thunderbirds ကို AndrewClark2 သွားသည်
ရုံးက Lego မှ အဆိုပါရုံးမှ
benlouisa အားဖြင့် Winnie the Pooh
The Haunted Mansion: နှစ် ၅၀ ပြည့်အထိမ်းအမှတ် GoodOlPrice မှ
Stephani အားဖြင့် Anatomini
ဒါဟာအားလုံးထုတ်ကုန်အကြောင်းကိုမဟုတ်ပါဘူး ideas ဟုတ်ပါတယ်၊ နောက်ဆုံးလှုပ်ရှားမှုကပရိသတ်တွေကိုမေးတာပါ တစ် ဦး နတ်သမီးပုံပြင်ရဲတိုက်ကိုတည်ဆောက်.
← LEGO Movie World သည် LEGOLAND Billund သို့မတ်လ ၂၈ ရက်တွင်ရောက်ရှိမည်
Lego Ideas အလယ်ခေတ်ပန်းပဲဆရာကိုလွှတ်ပေးရန် →